2014 - Nkowa di nkenke banyere onodu Geo - Geofumadas
Disemba, 2013 AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, GvSIG, manifold GIS, Microstation-Bentley, SuperGIS, uDig, ọtụtụ
Oge eruola ka m mechie ibe a, na dịka ọ na-eme na omenala nke anyị ndị na-emechi usoro kwa afọ, ana m atụfu ahịrị ole anyị nwere ike ịtụ anya na 2014. Anyị ga-ekwu karịa ma emesịa mana taa, nke bụ afọ ikpeazụ:
N'adịghị ka sayensị ndị ọzọ, a na-akọwa usoro dị iche iche na-eme ngwanrọ na iji Internetntanetị.
Na otu aka, ihe siri ike mbadamba + ọzọ ike arụmọrụ sistemụ + ihe ngwọta nke na-eji nwayọọ nwayọọ dochie Laptọọpụ = ọzọ mbadamba ahịa… Ọ bụchaghị dị ọnụ ala karịa ma na ikwu na ike ha. Smartphones na-ewere ọnọdụ ha na nkwukọrịta n'ihi njedebe nke oke.
Na akụkụ web: Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile sitere na igwe ojii ahụ, soro ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwanrọ ọ bụla na-adị ndụ na desktọpụ, ihe ndị ọzọ na-arụpụta nke netwọkụ mmekọrịta, ihe ndị ọzọ na-enweghị isi iji webata ụwa n'ezie.
Na ngwa GIS n'efu
Ọ ga-abụ afọ na-atọ ụtọ maka OpenSource. QGis, ya na oke owuwe ihe ubi; Ebe ọ bụ sọftụwia nke tozuru etozu mgbe obodo gachara, ọ ga-enwe obere nsogbu iji kwado karịa gvSIG, nke nwere ọtụtụ mpaghara ugbu a mana ole na ole ndị mmepe raara onwe ha nye. Anyị ghọtara ma kelee mbọ a gbara site na ntọala iji debe ihe nlere ahụ, mana anyị kwenyere na enwere ike ịmalite ya na mbụ, mgbe ego na-asọ karịa karịa etinye ego na mmepe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ, obere oge, nke na-eweta oke ego nke nkwado.
Free software abụghị banyere mpi, ọ bụghị banyere onye ka mma. Mana ọ dị oké mkpa iji lanarị na solvency na ọnọdụ nke nnukwu ọchịchọ sitere n'aka ndị ọrụ, omume na igwe ojii, ekwentị mkpanaaka na sistemụ gam akporo, usoro multidiscipline nke na-agwakọta ịdị mfe nke geomarketing na nkenke nke topography, ngwa ngwa ngwa ebe dịpụrụ adịpụ na ịbịaru geoengineering.
Dị dị iche iche, mana ị ga-amụta site na abụọ. Ihe ịma aka maka mba ụwa nke gvSIG na-ekwe nkwa, mana ọ ga-ewepụta azụmaahịa tozuru etozu na ozi ziri ezi. Mgbalị a na-eme iji ghara ịmaliteghachi QGis wheel bụ ihe amamihe dị na ya, mana ha ga-egbochi ịnwe ụlọ maka nkwado dị elu.
Tupu anyị ahụ ebum n'uche ya na Portable GIS, mana ugbu a anyị hụrụ ọhụụ Ogbugbe, nke a na-akpọbu OpenGeo, nke na-enye nkwado na ụkpụrụ ugbu a na ngwọta nke na-ejikọta akụkụ nke gburugburu:
Ike nke QGis dịka onye ahịa dị mkpa,
Ihe niile mmepe OpenLayers,
Ike ịgbagha nke GeoServer maka data dị na weebụ, agbakwunye na GeoWebCache iji mee ka tessellation rụọ ọrụ nke ọma,
Na PostGIS / Postgres maka njikwa, nyocha ma n'okpuru ma igwe ojii ma na-ewere ọba akwụkwọ nnabata zuru oke.
A chọrọ ajụjụ ndị a:
Kedu ihe bụ ngwakọta ọzọ?
Ọbá akwụkwọ ndị ejikọghị n'usoro a ga-adị?
Gini ga abu gvSIG Boundles?
Gịnị bụ ngwakọta na MapServer?
Nwanne ya nwoke, o nwere ike ime ihe a ma obu nwanne ya nwoke?
SEXTANTE ọ ga - adị ndụ ma ọ bụrụ na nna nna ya na-echekarị banyere GRASS?
Gini di mmepe gvSIG nwere ugbua?
Ole n'ime ihe ESRI na-eji n'okpuru ọmarịcha ihu ahụ?
Ọtụtụ n'ime azịza ndị a enweghị mmasị maka onye ọrụ nkịtị, mana ndị na-eme mkpebi, ma ọ bụ n'ihi na ha ewerela ha, ma ọ bụ n'ihi na ha kwesịrị ime ya.
Na agbanyeghị na ejighị n'aka, anyị ga-ekwenye na afọ ojuju na ọ dịbeghị mgbe emepe GIS software dị n'oge dị mma. Ya mere, 2014 na-ekwe nkwa, maka ndekọ, ọ bụghị maka mmadụ niile. Ndị ahụ na-ewu ewu maka ịmepụta ihe ndị e kere eke, ndị ọzọ na-eto eto na obodo, ọkachamara na ihe ọ bụla.
Ngwaọrụ nke ụlọ ọrụ.
N'ebe a, ebumnuche dị iche, ebe ọdịmma bụ akụ na ụba, nke anyị ga-ahụ ụdị omume ahụ na ndị buru ibu:
ESRI, dị jụụ.
AutoDesk na-agakwuru ndị mmekọ buru ibu n'ihi nsogbu nke nsogbu ahịa ngwaahịa. Mara na GIS abụghị ọrụ ya, na-enwetakwu ihe n'ichepụta, ihe nkiri na ije.
Esemokwu na-arịwanye elu nke nnukwu azịza nke na-emejupụta Geomedia + Erdas.
Bentley na-azụ ndị ahịa azụmaahịa na-agba ọsọ, na niche ya: Injinia na Akụrụngwa. Na mpaghara GIS, ọ bụ naanị ihe na-eme ka mbadamba nkume na ike ịmekọrịta na ndị otu egwuregwu.
Mapinfo ... Ọ ka nwere ihe PB na-ebute ụzọ?
Ndị na-abaghị uru nke ha.
Supergis, n'atụghị ụjọ ọ bụla maka ihe ESRI na-eme, yana ịchọ ahịa ahịa ọdịda anyanwụ.
GlobalMapper, kwụsie ike, na-ata ahụhụ site na pịịlị nke na-anaghị agbaghara ngwa ọrụ anaghị eme ihe niile mana ihe ọ na-eme ... Nkwanye ugwu anyị. Ọ na-eme nke ọma.
Manifold GIS ... Enweghị ịkọ, na mgbe ụkọ mmiri gachara ọtụtụ afọ ma e jiri ya tụnyere ọgụ ike mbụ ya.
Ndị ọzọ ... Na-achọ usoro anwansi.
Ọganihu anyị megoro na mbụ bụ ihe ịtụnanya, n'ihe enwere n'azụ abis. N'agbanyeghị mbọ ahụ, ha achọtaghị ụzọ ha ga - esi mee ka obodo sie ike ... nke m chere, agaghị eme ma ọ bụrụ na ha elekwasị anya na ọzụzụ nke aka ya. A 2D CAD iji mee atụmatụ atụmatụ na-echeghị na BIM, ga-echefu echefu.
Omume azụmahịa na 2014
Ma ọ dịkarịa ala na ọnọdụ anyị, ọ ga-ewe oge maka ihe anyị maara ga-eme otu ụbọchị: worlddị ihe atụ ụwa (BIM), ebe ọzụzụ ga-agbakọta: njide data, ọdịdị ala, imewe CAD na ọrụ akụrụngwa.
Na 2014 CAD ga-ekwusi ike ịme ihe atụ BIM, mana ụzọ ya ga-adị nwayọ n'ihi ntorobịa nke ụkpụrụ. Ọdịdị nke OpenSource na CAD bụ ihe a ga-ata ụta ọzọ, ebe ọ bụ na ọ bụ ya na-agbanye ma na-eme ka ụkpụrụ dị elu. N'etiti ndị ukwu, imewe ga-abịarute nso ịrụ ọrụ, ụfọdụ BIM mana amachi iji na ọnọdụ pụrụ iche. Nsonaazụ kachasị mma ga-agbaso ụkpụrụ maka obodo ndị nwere ọgụgụ isi, nke na-aga n'ihu, maka ugbu a ka ndị nrụpụta na ndị nrụpụta chee maka ịdị njikere, mana a ka nwere ọtụtụ ihe ichere.
Ọ ga-abụ nnukwu afọ maka Cadastre, ka anyị cheta afọ ọ bụ, na n'ezie ndị na-ese anwụrụ ọkụ ga-aga n'ihu nyocha miri emi banyere ihe mere na nkwupụta Cadastre 2014. Na ịse anwụrụ anwụrụ anwụrụ, enwere nnukwu ọganiihu na ụkpụrụ na ezigbo ihe atụ nke LADM, ọ nwụrụ ọtụtụ Site na ihe eserese, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na ụlọ ọrụ nkeonwe etinyela onwe ha nke ọma, mana ọ bụghị ụlọ ọrụ ọha na eze na-aga n'ihu n'otu ụzọ ahụ, yabụ ịghaghachi ụgwọ bụ ihe a na-enyo enyo na ma iwu ọha na eze na-egosi dị ka ozi na arụmọrụ. nke na-eme ka ndụ dịrị onye ọrụ mfe.
Yabụ na azụmaahịa GIS zuru oke ga-aga n'ihu na-agbagharị gburugburu geolocation, nke bụ nnukwu nweta. Mana anyị maara na GIS nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye, n'ọtụtụ ọzụzụ ndị ka na-enye ọgaranya ya. N'afọ a, anyị nwere ike ịtụ anya karịa site na njide na usoro ihe atụ, ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ikwu na ọ ga-ewusi usoro na azụmaahịa nke ndị na-abụghị ọkachamara nwere anya ha.
America ga-enwe nnukwu afọ ya, ma tinye anya ya na World Cup na Brazil, ọ ga-adọta ọtụtụ ihe omume ụwa. Anyị ga-ahụ nnwale nke ime Latin American Geospatial Forum na Mexico.
Ma ọ bụghị ya
Anyị ga-ele anya. Obi dị m ụtọ ịhụ ka akụkọ mgbasa ozi mmekọrịta ghọrọ azụmahịa, blọọgụ na-enweta ikike, a NosoloSIG onye ghaghachitere ezigbo ihe oma, nwa nwoke ghachaa ulo akwukwo di elu, nne kenye anyi ndi ozo n’ulo ozo
... nwa agbọghọ ga-eme ka anya anyị dị ka nke mbụ, na akuku gbara ọchịchịrị, n'ime ụlọ ụgbọ, na klaasị, na windo nke ndụ ...
Obi ụtọ na afọ ọhụụ.
Previous Post«Previous CartoDB, ndị kasị mma ike map online
Next Post Olee otú ụwa map na 1922Next »